संविधानसभा असफल हुन दिंदैनौं : ओली
काठमाडौं, माघ ९ - एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानसभा असफल हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।संविधानसभा भवनबाट बाहिरनेक्रममा बिहीबार साँझ सञ्चारकर्मीहरुसित अध्यक्ष ओलीले पहिलो एक वर्ष असफल भए पनि पूरै संविधानसभा असपल नहुने बताए ।व्यवधान पुर्‍याउने पनि अवधि हुन्छ, एमाओवादीको अवरोधबारे उनले भने, 'तर संविधानसभा असफल हुन दिंदैनौं ।'
प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन-जनताको आशामा लागेको चोटले मर्माहत छु
९ माघ:प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। उनले सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रका सहयात्री दलले मिलेर हाँसिल गरेका उपलब्धीलाई मिलेरनै संस्थागत गरौं भन्ने भावनालाई केही दलले कमजोरीको रुपमा लिएको बताए। उनले आपसि मेलमिलाप र सहकार्यको प्रयासलाई नछोडेको बताए। सहकार्यको भावना नटुटोस् भन्ने प्रयत्नमा आफू रहेको बताए।
बाबुरामका कारण संविधानसभामा मुठभेडः नेपाल
काठमाडौं, माघ ८ - पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधवकुमार नेपालले संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईकै कारण संविधानसभामा मुठभेड भएको आरोप लगाएका छन् ।
मस्यौदा पनि नल्याई माघ-८ टर्दै ,गतिरोध बढ्दै
काठमाडौ, माघ ८ -विवादित अन्तरवस्तु र प्रक्रिया दुवैमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा संविधान जारी भइसक्नुपर्ने माघ ८ मा मस्यौदासमेत नआउने भएको छ ।
सत्तापक्षको प्रक्रियामै दबाब ,जबर्जस्ती गरे झन् संकट: दाहाल
काठमाडौ, माघ ८ - कांग्रेस-एमालेका शीर्ष नेतृत्वले संविधानसभामा अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन घण्टा बसेको दुई दलको बैठकले बिहीबार जुनसुकै हालतमा पनि बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
संविधानसभा बैठक कक्षमा खुसार्नीको धुलो भेटियो
८ माघ, काठमाडौं । संविधानसभाको बैठक कक्षमा खुर्सानीको धुलोका पोकाहरु भेटिएको छ ।संविधानसभाको बैठक बस्नुअघि सुरक्षा जाँच गर्नेक्रममा विभिन्न स्थानमा खुर्सानीका धुलोका १० पोका फेला परेको हो ।
सं‌विधान बनाउन ३० अर्ब खर्च
८ माघ :राजनीतिक दलहरूको अडानले संविधान जारी गर्ने तिथि जति लम्बिँदैछ, संविधानकै नाममा राज्यकोष खर्च उति खापिँदैछ। जनआन्दोलन २०६२/६३ यता भएका दुइटा संविधानसभा निर्वाचन र सभासदका लागि तलबभत्तालगायत शीर्षकमा अहिलेसम्म ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र करिब २२ अर्ब खर्च भयो।
भट्टराईले भने,संविधान दिन सकेनौं,जनतासँग माफी मागौं
८ माघ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले निर्धारित समयसिमा भित्रै संविधान दिन नसकेकोमा जनतासँग विनम्रतापूर्वक माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति समेत रहेका भट्टराईले क्षमायाचना माग्दै सबै दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने पनि बताए ।
नेम्वाङको प्रश्न माननीय सदस्यहरु ! जनताले के भन्लान् ?
दुई घण्टासम्मको नाराबाजी र रोष्टम घेराउपछि संविधानसभाको बैठक आधा घण्टालाई स्थगित भएको छ ।
संवाद समितिको प्रतिवेदन माथी संविधान सभामा पुनः छलफल सुरु
संविधानसभा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन माथी संविधान सभामा पुनः छलफल सुरु भएको छ । संवाद समितिले संविधानका अन्तरबस्तुमा रहेको बिवाद समाधान गर्न नसकेपछि अब के गर्ने भन्ने बिषयमा संविधान सभामा छलफल सुरु भएको हो ।